Mifidy ny Mac tsara indrindra ho an'ny oniversite | avy amin'ny mac aho
Misafidiana Mac tsara indrindra ho an'ny oniversite
Ny iray amin'ireo fanontaniana tsy apetratsika matetika rehefa mividy sarintanin'ny oniversite dia ny hoe iza no hofidiana. Amin'io lafiny io dia misy safidy vitsivitsy azo alaina ary maimaim-poana ny tsirairay. fidio ny fitaovana mety aminao araka ny filanao sy ny paosinao. Ary izany dia ao amin'ny Apple dia efa fantatra, afaka mandany ampy fotsiny ianao amin'ny asa ary mamaly tsara ny fitaovana, miasa ary tena tsara na mandany betsaka kokoa ary ny fitaovana dia tena milina matanjaka sy mahavariana.
1 Solosaina Apple ho an'ny oniversite
2 Mac famolavolana sy lanja
3 Endri-javatra amin'ny Mac miaraka amin'ny processeur M1
4 Ny kintan'ny mpianatry ny oniversite dia ny MacBook Air
4.1 Ny vidin'ny MacBook Air dia iray amin'ireo henjana indrindra
Solosaina Apple ho an'ny oniversite
Ny fisafidianana ny solosaina Apple tsara indrindra ho an'ny anjerimanontolo dia asa somary sarotra ary tsy mora ny mamaly ny fanontaniana momba ny solosaina sahaza antsika mihoatra na latsaka. betsaka ireo anton-javatra miovaova izay mamarana ny fividianana fitaovana iray na hafa.
Amin'ny ankamaroan'ny tranga, miaraka amin'ireo fitaovana fototra amidin'i Apple, dia afaka mamaha haingana ny fisalasalana isika, fa misy ihany koa ireo mpianatry ny oniversite izay tia fitaovana matanjaka kokoa. Amin'ity tranga ity miaraka amin'ny ny fahatongavan'ireo processeurs Apple Silicon M1 vaovao, ny orinasa dia namely ny latabatra manoloana ny tsy fitoviana amin'ny Intel. Ankehitriny dia somary mora kokoa ny misafidy Mac ary satria izy rehetra dia manana hery sy angovo mahomby mba hifanaraka amin'ny fitaovana.
Na izany na tsy izany, ny fisafidianana Mac ho an'ny oniversite dia mety ho aretin'andoha kely ho an'ny mpianatra, noho izany dia hanandrana isika anio mamaha ny sasany amin'ireo fisalasalana misy rehefa tonga amin'ny fahazoana vaovao Mac amin'ny 1000 euros mahery fotsiny mba hianarana sy hiarahana miasa aminy.
Mac famolavolana sy lanja
Ny Apple Macs vaovao dia manana endrika tena mitandrina ary na dia ny maodely MacBook Pro aza dia toa niverina kely tamin'ny lasa izy ireo niaraka tamin'ireo endrika matevina kokoa. manolotra seranana maromaro izy ireo izay matetika tsy ampiasain'ny mpianatry ny oniversite. Izany no mahatonga ny MacBook Pro vaovao miaraka amin'ny processeur M1 amin'ny voalohany dia tsy ho fitaovana atolotra ho an'ny mpianatry ny oniversite na mpianatra. Tsy midika akory izany fa raha te hisafidy MacBook Pro ny mpampiasa dia dikan-teny ratsy izany, fa ny mifanohitra amin'izany.
Amin'ity tranga ity, ny lanjan'ny fitaovana sy ny fitaovana 16-inch vaovao navoakan'i Apple, no resahinay amin'ny 16″ MacBook Pro, tsy ny tsara indrindra ny mitondra azy ao anaty kitapo foana na dia azo zakaina aza ny lanjany mihoatra ny roa kilao.
Raha mifantoka amin'ny 14-inch MacBook Pro, ny lanjany dia 1,61 kg somary azo zakaina nefa mbola tsy azo ampiharina indrindra rehefa mitondra azy mandritra ny andro ao anaty kitapo na kitapo. Averinay indray, tsy voatery ho zavatra mamerina ny fividiananao raha te-hihazona azy ireo ianao, fitaovana tena ilaina tokoa izy ireo fa tsy izy ireo no MacBook tsara indrindra ho an'ny oniversite noho ny habeny sy ny lanjany.
Endri-javatra amin'ny Mac miaraka amin'ny processeur M1
Amin'ity tranga ity, ny tombotsoan'ny Mac vaovao miaraka amin'ny M1 dia feno herisetra. Ireo processeurs vaovao navoakan'i Apple ireo dia manome ny mpampiasa ny hery sy ny fizakan-tena tena mahaliana, ka ny torohevitra voalohany omenay anao dia raha azonao atao, mandehana mivantana amin'ny solosaina miaraka amin'ity processeur ity, na inona na inona solosaina. Ary izany no izy Raha ny momba ny fanavaozana dia tombony lehibe ihany koa ny fananana ilay processeur vaovao ao anatin'ny Mac. satria amin'ny ho avy dia havaozina azo antoka.
Rehefa manokatra ny tranokalan'ny Apple izahay ary hitantsika ny MacBook Pro dia tsy azo ihodivirana ny mieritreritra azy ireo ho an'ny oniversite tena matanjaka sy mahaliana ireo ekipa ireo rehefa mieritreritra ny hividy Mac ho an'ny oniversite ianao, fa tsy maintsy mieritreritra foana ny portability ary ny modely 16-inch dia tsy ho tsara indrindra ho azy.
Ny ambiny amin'ireo maodely MacBook Pro, na ny 13-inch sy 14-inch, dia mety ho tafiditra ao anatin'ireo "fitaovana atolotra" ho an'ny oniversite, na dia tsy mila seranana maro be aza ianao amin'ny farany. ny safidy ho an'ny fahasamihafana-ny vidiny dia mety ho fanapahan-kevitra.
Ny kintan'ny mpianatry ny oniversite dia ny MacBook Air
Amin'izao fotoana izao dia ny MacBook Air ihany no sisa tavela. Ity ekipa ity hatrany no nofidian’ny mpianatra Noho ny tsy fahampian'ny lanjany dia 1,29 kg izany. Ny fahatongavan'ireo processeur M1 vaovao dia nahatonga ity ekipa ity ho iray amin'ireo tsara indrindra teo amin'ny tantaran'ny MacBook Air.
Teo aloha, ny hany mpifaninana aminy eo amin'ny latabatra amin'ny resaka portability, endri-javatra ary habe dia avy amin'ny orinasa Cupertino ihany koa. ny MacBook 12-inch. Farany, nesorina teo an-tsena io fitaovana io, nanome lalana ny MacBook Air ho safidy tsara indrindra amin'ny resaka fampitana.
Ankehitriny miaraka Ny fahatongavan'ireo processeur M1 ireo MacBook Air ireo dia ho fitaovana tsara indrindra ho antsika rehefa mitondra azy ireo any amin'ny oniversite na sekoly, noho ny antony isan-karazany fa indrindra noho ny efijery LED lehibe 13,3-inch (diagonal) miaraka amin'ny teknolojia IPS, famahana teratany 2.560 amin'ny 1.600 amin'ny 227 piksel, izay mihoatra noho ny ampy ho an'ny ankamaroan'ny tranga.
Ny vidin'ny MacBook Air dia iray amin'ireo henjana indrindra
Ny vidiny dia zavatra izay milalao manohana ny MacBook Air ihany koa. Ary na dia marina aza fa ny MacBook Pro 13-inch dia manana vidiny mitovy amin'ny an'ity MacBook Air ity miaraka amin'ny processeur M1, izay vidiny 1.129 Euro ny tombony amin'ny resaka portable dia tsara kokoa amin'ny modely Air. Izany no mahatonga azy ho kintana rehefa mifidy solosaina voalohany ho an'ny oniversite.
Mazava ho azy fa afaka misafidy ny ekipa tiany ho an'ny oniversite ny tsirairay fa amin'ity tranga ity dia maro amin'ireo mpianatry ny oniversite no nanomboka tamin'ny iray amin'ireo ekipa ireo ary tamin'ny farany dia nivarotra azy ireo hividianana modely ambony. Ataovy ao an-tsaina fa ny solosaina Apple dia tsy mamoy vola be toy ny solosaina hafa, ka rehefa mametraka azy ireo hamidy mba hividianana zavatra matanjaka kokoa na tsara kokoa, hahazo valisoa ny fampiasam-bola voalohany.
Ny MacBook Air dia tsy isalasalana fa ny fitaovana nofidian'ny maro aminareo ho an'ny oniversite sy Io no iray amin'ireo fanapahan-kevitra tsara indrindra amin'ny lafiny kalitao, hery, portable ary vidiny. Avy eo dia misafidy izay mety aminy ny tsirairay, fa ity no safidy tsara indrindra ho an'ny oniversite.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » Misafidiana Mac tsara indrindra ho an'ny oniversite
Ny MacBook Pro M1 Max dia voamarina fa tsara indrindra ho an'ny mpaka sary
Nahazo fanavaozana vaovao ny AirPods 3